Forum serasera malagasy Mba Diniho Kely - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Mba Diniho Kely
mivoatra - 08/07/2015 16:11
Fikambanana azo heverina fa tsara ity fikambanana ity
Ny fikambanana " Mba Diniho Kely, MDK "dia karazana asa fampandrosoana an' i Madagasikara ihany. Noforonina izy io mba hanampiana ny olona hanova toe-tsaina, mba ho tia mandinika sy mamakafaka, mamantatra, amin'ny fomba fijery ara-tsiantifika. Fampandrosoana hoy aho , satria ny fampandrosoana dia tsy midika fa vola ihany no aroso ao, fa kosa ilaina ny fanampiana ny olona, indrindra ny olon-dehibe, ireo Ray aman-dReny sy ireo tanora vao miana-mandeha, satria izy ireo no manao fanapahan-kevitra isan'andro, amin'ny fanomezana azy ireo fanazavana ny zava-misy efa fantatra, mba ahafahan' izy ireo manao fanapahan-kevitra tsy diso, na farafaharatsiny tsy misy akony eo amin' ny fiainany.
Ny karazana fikmbanana toy itony dia efa misy eran'izao tontolo izao (CSICOP ao Etazonia : Committee for the scientific investigation of the claims of the paranormal , GWUP ao Alemana, CICAP ao Italia, AFIS ao Frantsa : Association Francaise pour l?Information Scientifique, fikambanana SYSIFOS ao République Tchéque....), ka noraisko ho adidiko ny mba nitondra azy eto Madagasikara , mba ahafahantsika manaradia ireo firenena sasany efa mandroso.
1.Ny tanjona : ny tanjonay dia hanampy ny olona mba hanana toe-tsaina tia mandinika ny mamakafaka, amin'ny fomba fijiery ara-siantifika. Ny fomba fijery ara-siantifika mantsy dia tsy hoan' ny olona mpikaroka any amin' ny laboaratoara ihany , fa kosa azon' ny tsirairay atao araka ny fahalalana ananany sy ny ambaratonga misy azy eo amin' ny fiarahamonina. Izany dia tantetrahina amin' ny alalaln'ny ady hevitra, fanomezana azy ireo fanazavana sy vaovao araka ny siansa, amin' ny fomba tsotra. Izany no atao mba tsy ahafahan'ny olona mandray tsy misy fanakianina ireo zavatra lazaina etsy sy eroa : hery miafina, angovo mahasitrana, fitsaboana hosoka, filazana ny hoavy hosoka , fandrebirebena isankarazany sns....
Ezaka lehibe tanterahinay koa ny hanome torohevitra ny tsirairay eo amin´ny fiainana andavanandro.
mpisotrtoaka - 15/07/2015 12:18
mivoatra - 17/07/2015 09:20
tsara io an
TenWords - 30/09/2015 09:45
ngah tsy manana compte izy ity fa Groupe anaty facebook fotsiny?